Iyo New Face yeE-Commerce: Iyo Impact yeMuchina Kudzidza muIndasitiri | Martech Zone
NeChishanu, Gumiguru 29, 2021 NeChishanu, Gumiguru 29, 2021 Henry Bell
Wakambofungidzira here kuti makomputa anogona kukwanisa kuziva nekudzidza mapatani kuitira kuti aite sarudzo dzawo? Kana mhinduro yako yanga iri kwete, iwe uri muchikepe chimwe chete nevazhinji nyanzvi mune e-commerce indasitiri; hapana aigona kufanotaura mamiriro ayo azvino.
Nekudaro, kudzidza kwemichina kwaita basa rakakosha mukushanduka kwe e-commerce mumakumi mashoma emakore apfuura. Ngatitarisei kuti e-commerce iripi izvozvi uye sei vanopa sevhisi yekudzidza muchina ichaiumba munguva yemberi isiri kure-kure.
Chii chiri Kuchinja muE-commerce Indasitiri?
Vamwe vanogona kutenda kuti e-commerce chinhu chitsva chakasandura nzira yatinotenga, nekuda kwekufambira mberi kwetekinoroji mumunda. Hazvisizvo zvachose, zvisinei.
Kunyangwe tekinoroji ichiita basa rakakura mukuita kwatinoita nezvitoro nhasi, e-commerce yanga iripo kweanopfuura makore makumi mana uye yakakura izvozvi kupfuura nakare kose.
Retail e-commerce kutengesa pasi rese yakasvika 4.28 trillion madhora muna 2020, nemari ye e-retail inotarisirwa kusvika 5.4 trillion emadhora muna 2022.
Asi kana tekinoroji yagara iripo, kudzidza kwemichina kuri kuchinja sei indasitiri izvozvi? Zviri nyore. Artificial intelligence iri kubvisa mufananidzo weiyo yakapfava yekuongorora masisitimu kuratidza kuti ine simba sei, uye neshanduko, inogona kunyatso kuve.
Mumakore apfuura, hungwaru hwekugadzira uye kudzidzira kwemuchina zvaive zvisina kuvandudzwa uye zviri nyore mukuita kwavo kuti zvinyatso kupenya maererano nemashandisirwo avo angangoita. Zvisinei, hazvisisirizvo.
Zvigadzirwa zvinogona kushandisa pfungwa sekutsvaga kwezwi kusimudzira zvigadzirwa pamberi pevatengi sezvo matekinoroji senge muchina kudzidza uye chatbots anowedzera kuwanda. AI inogonawo kubatsira nekufanotaura kwekutanga uye backend rutsigiro.
Machine Kudzidza uye Kukurudzira Injini
Kune akawanda makuru mashandisirwo eiyi tekinoroji mu e-commerce. Pachiyero chepasi rose, injini dzekukurudzira ndeimwe yemhando dzinopisa. Iwe unogona kunyatso ongorora chiitiko chepamhepo chemazana emamiriyoni evanhu vachishandisa muchina kudzidza maalgorithms uye kugadzirisa huwandu hwakakura hwe data zviri nyore. Iwe unogona kuishandisa kugadzira kurudziro yechigadzirwa kune chaiyo mutengi kana boka revatengi (auto-segmentation) zvichienderana nezvavanofarira.
Iwe unogona kuona kuti ndeapi mapeji madiki mutengi anoshandiswa nekuongorora akawana yakakura data pane yazvino webhusaiti traffic. Waigona kuziva zvaaiita uye kwaakapedza yakawanda yenguva yake. Zvakare, mibairo ichapihwa pane yakasarudzika peji ine zvinhu zvinokurudzirwa zvichibva pane akawanda masosi eruzivo: chimiro chezvakaitika kare zvevatengi, zvaunofarira (semuenzaniso, zvekuzvivaraidza), mamiriro ekunze, nzvimbo, uye social media data.
Machine Kudzidza uye Chatbots
Nekuongorora data rakarongeka, machatbots anofambiswa nekudzidza muchina anogona kugadzira imwe "yemunhu" hurukuro nevashandisi. Chatbots inogona kurongwa neruzivo rwegeneric kupindura kumibvunzo yevatengi vachishandisa muchina kudzidza. Chaizvoizvo, vanhu vazhinji iyo bot inodyidzana navo, zviri nani inonzwisisa zvigadzirwa / masevhisi ee-commerce saiti. Nekubvunza mibvunzo, ma chatbots anogona kupa makuponi akasarudzika, kufumura zvingangogona kutengesa, uye kugadzirisa zvinodiwa nemutengi kwenguva refu. Mutengo wekugadzira, kuvaka, uye kubatanidza chatbot yewebhusaiti ingangoita $28,000. Chikwereti chidiki chebhizinesi chinogona kushandiswa nyore kubhadhara izvi.
Kudzidza Kwemuchina uye Zvekutsvaga
Vashandisi vanogona kushandisa muchina kudzidza kuti vawane chaizvo zvavari kutsvaga zvichibva pamubvunzo wavo wekutsvaga. Vatengi parizvino vanotsvaga zvigadzirwa pane e-commerce saiti vachishandisa mazwi akakosha, saka muridzi wesaiti anofanira kuvimbisa kuti iwo mazwi akakosha akapihwa kune zvigadzirwa izvo vashandisi vari kutsvaga.
Kudzidza nemuchina kunogona kubatsira nekutsvaga masinonimisheni emazwi anonyanya kushandiswa, pamwe nemitsara inofananidzwa inoshandiswa nevanhu kumubvunzo mumwe chete. Kugona kweiyi tekinoroji kuita izvi kunobva mukukwanisa kwayo kuongorora webhusaiti uye analytics yayo. Nekuda kweizvozvo, e-commerce mawebhusaiti anogona kuisa yakakwira-yakatemerwa zvigadzirwa kumusoro kwepeji uku ichitungamira mareti ekudzvanya uye kushandurwa kwekare.
Nhasi, hofori dzinoda EBay vaona kukosha kweizvi. Nezvinhu zvinodarika mazana masere emamiriyoni zvakaratidzwa, kambani inokwanisa kufanotaura uye nekupa iyo inonyanya kukosha mibairo yekutsvaga ichishandisa hungwaru hwekugadzira uye analytics.
Kudzidza Kwemuchina uye E-commerce Targeting
Kusiyana nechitoro chemuviri, kwaunogona kutaura nevatengi kuti vadzidze zvavanoda kana zvavanoda, zvitoro zvepamhepo zvinoputirwa nehuwandu hukuru hwe data revatengi.
Semagumo, chikamu chevatengi yakakosha kune e-commerce indasitiri, sezvo ichibvumira mabhizinesi kuti agadzirise nzira dzawo dzekutaurirana kumutengi wega wega. Kudzidza kwemichina kunogona kukubatsira kuti unzwisise zvinodiwa nevatengi vako uye uvape ruzivo rwekutenga rwakakwenenzverwa.
Kudzidza Kwemuchina uye Chiitiko cheMutengi
Ecommerce makambani anogona kushandisa muchina kudzidza kupa ruzivo rwakanyanya kune vatengi vavo. Vatengi nhasi havangofarire chete asiwo vanoda kutaurirana nemhando yavo yavanoda nenzira yemunhu. Vatengesi vanogona kugadzirisa kubatana kwega kwega nevatengi vavo vachishandisa hungwaru hwekugadzira uye kudzidza kwemichina, zvichikonzera chiitiko chirinani chevatengi.
Uyezve, ivo vanogona kudzivirira matambudziko ekutarisira vatengi kuti asaitike nekushandisa muchina kudzidza. Nekudzidza kwemichina, mitengo yekusiya ngoro pasina mubvunzo yaizoderera uye kutengesa kwaizowedzera pakupedzisira. Mutengi anotsigira bots, kusiyana nevanhu, anogona kupa mhinduro dzisina tsarukano chero nguva yemasikati kana husiku.
Kudzidza Muchina uye Kuona Kubiridzira
Anomalies ari nyore kuona kana uine data rakawanda. Nekudaro, iwe unogona kushandisa muchina kudzidza kuona mafambiro mu data, kunzwisisa izvo 'zvakajairika' uye izvo zvisiri, uye kugamuchira chenjedzo kana chimwe chinhu chikatadza.
'Kuona chitsotsi' ndiyo inonyanya kushandiswa pane izvi. Vatengi vanotenga zvinhu zvakawanda nekadhi rechikwereti zvakabiwa kana kuti vanokanzura maodha avo kana zvinhu zvaunzwa matambudziko anowanzo kuvatengesi. Apa ndipo panopinda muchina kudzidza.
Kudzidza kweMichina uye Dynamic Pricing
Panyaya yemitengo ine simba, kudzidza muchina mu e-commerce kunogona kubatsira zvakanyanya uye kunogona kukubatsira kusimudzira maKPIs ako. Iko kugona kwealgorithms yekudzidza mapatani matsva kubva kudhata ndiko kunobva kunobatsira uku. Nekuda kweizvozvo, iwo maalgorithms ari kugara achidzidza uye kuona zvikumbiro zvitsva uye maitiro. Panzvimbo pekuvimba nekudzikiswa kwemutengo kwakapusa, mabhizinesi e-commerce anogona kubatsirwa kubva kune ekufanotaura modhi anogona kuvabatsira kuona mutengo wakakodzera wechigadzirwa chimwe nechimwe. Iwe unogona kusarudza iyo yakanakisa kupihwa, iyo yakanyanya mitengo, uye kuratidza chaiyo-nguva kuderedzwa, nguva yese uchifunga nezve yakanakisa zano rekuwedzera kutengesa uye optimization yezvinhu.
Nzira idzo kudzidza kwemuchina kuri kuumba iyo e-commerce indasitiri isingaverengeke. Iko mashandisirwo eiyi tekinoroji ane chekuita zvakananga pabasa revatengi uye kukura kwebhizinesi muindasitiri ye-e-commerce. Kambani yako yaizovandudza basa revatengi, rutsigiro rwevatengi, kugona, uye kugadzira, pamwe nekuita zvirinani HR sarudzo. Machine yekudzidza algorithms e-commerce icharamba iri yebasa rakakosha kune e-commerce bhizinesi sezvavanoshanduka.
Ona Vendorland's Rondedzero yeMachina Kudzidza Makambani
Tags: mitengo ine simbae-zvokutengeseranaecommerceecommerce chigadzirwa kurudziroecommerce yekutsvaga mhinduroecommerce chidimbukubiridzira kuonamachine learningkuona chitsotsi chekudzidza muchinamuchina kudzidza segmentationvanopa sevhisi yekudzidza muchinazvigadzirwa zvinokurudzira injinitsvakiridzo yechigadzirwazvikamu
Henry Bell ndiye Musoro weChigadzirwa pa Vendorland. Iye ibhizinesi tekinoroji inofambisa shanduko yekukura kuburikidza nedhijitari tekinoroji nzira. Henry anoongorora zvakanyanya uye anodyidzana dambudziko rekugadzirisa ane hunyanzvi hwekuita muchinjiko muhutungamiriri hwechigadzirwa, manejimendi ekushandisa, uye data analytics.